Ndeapi Mapapiro Eko Kushambadzira Kwako? | Martech Zone
Ndeapi iwo Mapapiro eSarudzo Yako Yekutengesa?
Mugovera, June 1, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nezuro, ndakatanga kuverenga bhuku raNick Carter Makumi nemaviri echipiri: Simudza rako Bhizinesi Zvido. Ini ndinoda fananidzo yebhizinesi sekubhururuka mubhuku uye Nick anoitsanangura zvakakwana.
Imwe yenhaurwa dzekutanga ndeye simbisa. NASA inotsanangura kukwidza seinotevera:
Simudza isimba rinopesana nekuremerwa nendege uye rinobata ndege mudenga. Simudza inogadzirwa nechikamu chese chendege, asi zhinji yekusimudza pane yakajairwa nendege inogadzirwa nemapapiro. Simudza is a mechanical aerodynamic simba rinogadzirwa nekufamba kwendege kuburikidza nemhepo. Nekuti kusimudza isimba, ihwo huwandu hwevheji, hune zvese hukuru uye negwara rakabatana naro. Simudza inoshanda nepakati pekumanikidza kwechinhu uye inotungamirwa zvakaringana kune iyo kuyerera nzira.
Nezuro husiku, mumwe muridzi webhizinesi neni takanwa zvinwiwa uye isu taikurukura simba uye tarisiro yataive nayo nemabhizinesi edu. Ose mabhizinesi edu ari kuita zvakanaka, asi zvakatorwa mari inoshamisa kubva kwatiri. Handifunge kuti chero munhu anoziva, kudzamara vatanga bhizinesi, zvazvinoda. Kubva pakunyura mukuchengetedza, kusvika pakushushikana pamusoro pekuyerera kwemari, kune nyaya dzevashandi, kutengesa, kuverenga uye mitero… vanhu havazive kuti nenguva yatinonyatso shandira vatengi vedu zvinoda simba rega rega rekupedzisira.
Tinofanirwa kuchengetedza simba zvakanyanya sezvazvinogona saka tinogara tiine injini dzinomhanya uye bhizinesi riinaro simbisa. Kukakavadzana nematambudziko hazvigone kuburitswa kunze nekuti izvo zvinoshandisa simba rakawanda kupfuura zvatinokwanisa. Fungidzira ndege yaunoshandisa mafuta akawandisa kuti iite kuti iwe uende kwauri kuenda ... unodonha. Nekuda kweizvozvo, ini ndave kuita zvakanyanya kusarudza uye nekukurumidza nemhinduro uye chiito kupfuura zvekare.
Elevator ndiyo yakakosha hunhu hwese kubhururuka uye chishandiso chinobhururuka. Pandinotarisa bhizinesi rangu, iyo simbisa of DK New Media iri, pasina mubvunzo, iyi blog. Kumisikidzwa kweblog iri kwakatungamira kune vateereri vedu, bhuku rangu, matauriro angu ekutaura, basa rangu nemakambani emabhizimusi nemakambani eetekinoroji pasi rese, uye kuhaya vashandi vedu nebasa redu rinoenderera. Dai paive nemapapiro mubhizinesi rangu, ivo vaizove iri blog.
Nekudaro, zvisinei nekuipa kwezuva randinako, simba rakawanda sei randakashandisa, basa rangu rakaita sei, marii iri mubhangi uye nenyaya dzevatengi dzatingave nadzo, ndinogara ndichivimbisa kuti bhizinesi rangu rine simbisa. Ndinoziva pane zvimwe zvakawanda zvezvekubhururuka kwandinofanira kutarisisa (uye bhuku raNick riri kundibatsira kutarisa izvo), asi handimbofi ndakakanganwa hwaro hwebasa redu rese - iri blog. Iyi blog yakatitendera kubhururuka uye ichatiunzira chero kwatinoda kuenda. Ini ndinongofanirwa kuona kuti ndinochengeta injini dzayo dzichimhanya uye nekuenderera kuti tirambe tichikwira.
Ndeapi mapapiro ebhizinesi rako?
Jun 3, 2013 pa9: 29AM
Ndatenda. zvinobatsira kwandiri